Jiingada - Wikipedia
Deegaan in BariTemplate:SHORTDESC:Deegaan in Bari
Maamul ahaan ka tirsan
Jiingada() (), Jiingada Waa Magaalo ka tiran magaalooyinka gobolka Bari, Waxay ku barbar taalaa laamiga isku xira Boosaaso iyo gobolada kale ee dalka. Waxaa la assaasay sanadii 1945, waa magaalo koreysa waxaanna Jihada Woqooyi Bari ka xiga Beeraha Dhud oo ah deegaan Beereed qayb weyn ka ciyaara nolosha Dhaqan-dhaqaale ee Magaalada.
Jiingada waxaa ku hareeraysan Deegano ku wanaagsan daaqsinta sida Dooxada Niriq, Dooxooyinka Jiingada Iyo Banka Jiingada. Magaalada waxay aad buux dhaaf u noqotaa xilliga xagaa baxa markaas oo dad badan oo Magaalada Boosaaso ka yimi ay yimaadaan.
Marka loo eego Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Puntland, Jiinagada waxaa ku yaala labo Iskool oo Hoose & Dhexe ah, sidoo kale waxaa ku yaala Iskoolo lagu barto luuqadaha qalaad, Iyo Maderisooyin Quraanka Kariim ka ah lagu barto.
Tuulada Jiingada ayaa ka mid ah meelaha lagu soo dhoweeyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Shir Nabadeed oo Ka Furmay Tuulada Jiingada oo Shalay Agagaarkeeda dagaal ka dhacay
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiingada&oldid=201931"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Juun 2020, marka ee eheed 12:33.